Tora Ongororo Yemahara Yako Blog kana Saiti | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 7, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iwe waisa yakawanda yekuedza mune rako bhizinesi saiti kana yemubatanidzwa blog, inguva yekuchimisa. Isu takanyora Corporate Blogging yeDummies kubatsira mabhizinesi kuwedzera mablogiki kuvaka chiremera uye kuwana zvinotungamira online. Kunyangwe bhuku racho rakanangidzirwa kublogging uye blogging mapuratifomu, dzidziso idzi dzinowedzera kune webhusaiti webhusaiti kusvika pasi kune yekubhadhara-per-tinya peji yekumhara.
Vazhinji venyu makatotanga kuverenga bhuku uye mhinduro yacho yanga ichifadza. Taiziva kuti tainotengesa zvakanyanya - asi hatina kuziva kuti rakakura sei bhuku raizotambirwa. Vamwe vanhu vakanyora pachavo uye vatizivise kuti traffic yavo uye shanduko dzatove kumusoro pane yavo blog mukati memavhiki ekuendesa mamwe emazano. Zvikuru!
Izvo isu zvatisina kuona kusvika pano, zvakadaro, wongororo pane Amazon, Miganhu, Barnes naNoble, Mabhuku akanaka, Sirifari, uye guruu.
Kana iwe ukaongorora bhuku iri pamhepo, tichaita ongororo yewebsite yako kana bhurogu uye nekukupa iwe imwe inovaka mhinduro maererano nezve dhizaini, yekutsvagisa injini, kushandura kugadzirisa uye huwandu hwehuwandu. Tichadaro nyora muposita uye tsanangurira vaverengi izvo zvaunoita iwe. Isu taimboita izvi pane ino blog uye ndokuidaidza "Blog Kubvarura"… uye ivo vakaitira makuru mapositi!
Mutemo wega ndewekuti iwe ndinofanira kunge ndakaverenga Corporate Blogging yeDummies uye unofanira kutumira iyo chinongedzo chekudzokorora mune zvakataurwa zveichi posvo. Ukangoita, isu tinotanga. Kana iwe ukaisa rimwe basa mune yako ongororo, isu tichaisa rimwe basa mune rako!
Tags: gore kadambarinhoroondokuongorora kweinboxmobile kuonadzoka nzira imweMarudzi
Donhwe, donhwe, donhwe… Buy
Sep 11, 2010 na1: 34 PM
Hei varume, ndiri kukuonai paBlog Indiana uye ndinotenda nekundivigira Vitamin Mvura. Ndiri kungopinda mubhuku, uye ndizvo zvese zvayakavimbisa kuva.